Wasiir Janan oo ku dhawaaqay inay weerarayaan Beled-Xaawo - Awdinle Online
Wasiir Janan oo ku dhawaaqay inay weerarayaan Beled-Xaawo
Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Jubbaland, maamulka Gobolka Gedo ee Jubbaland iyo saraakiisha ciidanka Daraawiiishta Jubbaland oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxaa ay si kulul ugu hadleen xaalada cakiran ee ka taagan gobolka Gedo iyo dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Beledxaawo.
Wasiirka amniga ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday inuu ka dhamaaday dulqaadka, islamarkaana ka falcelin doonaan wixii ka dhacay degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo.
Sidoo kale wasiirka ayaa waxaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo, isagoona shacabka Magaalada Beled-Xaawo ka dalbaday in ay ka baxaan magaaladaasi, si uusan dhibaato ugu soo gaarin dagaal ka dhaca degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo.
Wasiirka amniga Jubbaland ayaa waxaa uu eedeyn u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoona ku dhaliilay ‘in madaxweynaha uu dhibaato ka wado magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo’, sida uu hadalka u dhigay.
Dhawaan ayay aheyd markii magaalada Beled-Xaawo uu ka dhacay dagaal sababay khasaare isugu jira dhimaso iyo dhaawac kaasi oo dhexmaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo ciidamo uu hoggaaminayo wasiirka amniga Jubbalad .
Dowladda Soomaaliya ayaana dagaalkan ku eedeysay in ay ku soo qaadeen ciidamo ay soo hubeysay dowladda Kenya, waa sida hadalka ay u dhigtaye.
Previous articleBanaanbax ka bilaawday meelo kamid ah Magaalada Muqdisho
Next articleQarax lagu weeraray Askar Kenyan ah & khasaaro ka dhashay